Pamac 10.0 inosvika seyekuvandudza kuManjaro Linux | Linux Vakapindwa muropa
Pamac 10.0 kunze izvozvi uye, zvakanaka, izvozvi zvinotaridzika senge hubhubhu yesoftware
Mushure mekuziviswa pasingasviki masvondo maviri apfuura, ini pachangu ndakafunga kuti zvaizotora nguva yakareba kuti ndiwanikwe. Asi Pamac 10.0 yatosvika muManjaro kugadzirisa mapakeji. Kutaura nezve mapakeji, izvo zvakafanira kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni yePamac vasvika maawa mashoma apfuura uye, mushure mekumisikidzwa, izvo zvatichaona zvichave zvakafanana nezvatinoona mune zvimwe zvitoro, seGNOME Software, kana zvirinani chikamu.
Ichi chinhu icho tanga tatoona pavhidhiyo kutanga kwemwedzi uno, asi ikozvino tinogona kuzviyedza zviri pamutemo uye kushandisa iyo shanduro yakagadzikana. Kunyangwe Pamac chishandiso chinoshanda kwazvo chekugadzirisa mapakeji, chokwadi ndechekuti yaive iri kure nemamwe masoftware akadai seDiscover uye, kunyangwe ndichifunga kuti zano reKDE richiri nani maererano nedhizaini, Pamac 10.0 inhanho yakanyanya kumberi zvakakosha.
Pamac 10.0 inosvika pane yayo yakagadzikana vhezheni
Rondedzero yekuti mashandiro matsva acho sei Manjaro software chitoro Unevo muvhidhiyo inotevera yatakaburitsawo panguva iyoyo.
Sezvo ndanga ndambozviedza, yemabasa anga akafambiswa kwatiri, ini ndaizoratidzira iyo Software Mode, iyo inowanikwa kubva pamatombo matatu (sarudzo) uye nekutarisa bhokisi kuti iro rinokosha chete software riwonekwe uye rova ​​mamwe mapakeji senge ekuwedzera. Chikamu chitsva chemashoko chiri kurovawo, ndiko kuti, patinodzvanya papakeji kuti tione zvarinazvo kana zvainoita. Iko kutsva kutsva kwemashoko aya kunotaridzika zvakanyanya seGNOME Software's, izvo hazvireve kuti chinhu chakaipa.
Zviripachena kuti menyu kuruboshwe yanyangarika uye yakatsiviwa nemapepanhau ekudonhedzera kubva kwatichasarudza izvo zvatinoda kuwana. Panguva ino, zvakakodzera kutaura kuti, zvirinani izvozvi uye mu (yangu) Xfce, kuchine zvimwe zvikamu zvekushandurwa, senge "Tsvaga na" inoonekwa se "Bhurawuza na" uye "Tarisa" panzvimbo ye "Tarisa ».
Asi, kunyangwe nezvinhu zvinogona kuvandudzwa, Pamac 10.0 iri pano uye ndinoifarira zvirinani. Makadii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pamac 10.0 kunze izvozvi uye, zvakanaka, izvozvi zvinotaridzika senge hubhubhu yesoftware
Chokwadi pakutanga ndaifunga kuti kumisikidzwa kwakaipa manjaro XFCE kushoma kwandaive ndaita (ndichishandisa iyo Manjaro dhizaini yekumisikidza), nechimwe chikonzero, ndakaidzosera zvakare uye yapfuura vhezheni yakaonekwa yaive yakanyanya kufadza kutsvaga maapplication. Izvo zvisina kunaka zvine:
1- kana ichivhurwa haina kuratidza chero chishandiso mune yekutsvagisa tebhu.
2- Mubrowser Nezvasarudzo iwe unofanirwa kutsvaga imwe neimwe kusvikira wawana zvauri kutsvaga, ivo vanofanirwa kunge vakasiya sarudzo yekuti "ratidza zvese"
3- iyo yekuvandudza tebhu inoratidza yekupedzisira zororo yakaitwa (nemaoko) uye painovhurwa haina kuita yekuvandudza cheki senge yapfuura vhezheni, uyezve izvo zvinoonekwa zvinoita kunge zvichibva kuma80s.
4- Vakabvisa Software Kugadziridza kuvhura kubva kumenu yekushandisa (iyo yawakavhura pamac zvakananga).
Ndiri kureva, zvekuona kwandiri ivo vakazviparadza
Mhoro Gabriel. Kana ndisina kutadza kunzwisisa, iwo maviri ekutanga mapoinzi haana kudaro. Mafomu anonyanya kufarirwa anoonekwa kwandiri nekukurumidza pandinga kuivhura uye, kana uchitsvaga, iri «kuona» mu «zvese». Pfungwa yechina, ndinotsvaga "Wedzera" uye inosara, handizive chii chiri kukundikana iwe.
Muchikamu chechitatu ndinobvumirana uye ndinofunga vanofanirwa kuzvigadzirisa.
Mhoro Pablinux, pamac ichangobva kuvandudzwa kuchirongwa 10.0.2-1 uye izvozvi zvese zvadzokera kune zvakajairwa (ndisati ndatomboona zvidhori zvezvikumbiro zvakapa semuenzaniso: iyo tsvuku panda ye firefox) uye neruremekedzo Ku iyo Launcher yandakambotaura, mu manjaro (zvirinani mune XFCE vhezheni) paive nematanho maviri, imwe yaive "Wedzera / bvisa software" (shandisa pamac-maneja% U raira) uye imwe yacho yaive "Software Gadziridza" (shandisa rairo pamac-manager -updates), mune yapfuura gadziriso ino yekupedzisira launcher yakanga yanyangarika (ikozvino handizive kana vakaidzorera, nekuti iyo yandinayo ndakabvisa kubva kubhegi yandakaita mushure mekuisa manjaro)
Mune maonero angu ane mwero. Balance yegore reLinux uye yakavhurwa sosi
GitKraken: sangana nechinhu ichi chinonakidza chevagadziri